Drafitra hafa loko misy kodiarana chromatic | Famoronana an-tserasera
Fampifangaroana loko hafa amin'ny kodiarana chromatic
Araka ny tantaran'ny sinema, ny traikefa izay azo tamin'ny resaka fialamboly amin'ny efijery lehibe dia betsaka ary izany no izy ny loko dia manome fanitsiana tsara kokoa amin'ny zava-misy.
Ity tontolo ity dia miloko ary malalaka kokoa amin'ny filalaovana famoronana, manome anao ny fiainana bebe kokoa mahatonga ny mpijery ho faly ary tokony tsiahivina, satria toa misy ifandraisany ihany koa ny miverina amin'ny sarimihetsika, ara-bakiteny, nanomboka mpanao sarimihetsika sinema mainty sy fotsyNa izany aza, nahatratra ny fahalavorariana sary avo lenta tokoa izy ireo, mifanohitra amin'ny hazavana sy ny aloka ary ny matihanina amin'ny fampiasana jiro.
1 Ny loko ampiasaina amin'ny sinema: Samy manana ny asany ny tsirairay avy
2 Ny karazana loko sy ny fitambaran'izy ireo amin'ny scenario samihafa
2.1 Fangaro mitambatra Triadic
2.2 Drafitra loko Monochrome
2.3 Fampifangaroana loko analog
Ny loko ampiasaina amin'ny sinema: Samy manana ny asany ny tsirairay avy
Ny loko dia singa iray tena ilaina amin'ny fiteny sinematografika ary izany no izy raha tsy misy loko dia tsy misy sinema.
Ny loko dia mamela ny jiro ary izany dia miteraka aloka, kentrona, rejuvenate na taona, miteraka vokatra ara-psikolojika ny toetra, miankina amin'ny toerana nametrahana azy, ny atmosfera misy sary mihetsika. Amin'ny sinema mainty sy fotsy, tian'ny mpanatontosa sarimihetsika sasany Eisenstein na Fritz Lang Vitan'izy ireo ny nibahana ny tontolon'ny loko sy ny aloka, manome ny aloky ny toetra amam-panahy, mampiasa ny jiro backlight, ny setroka avy amin'ny afon'afo sy sigara.
Ny zavona sy ny vokatra hafa dia natao ho an'ny tanjona kanto, hanasongadinana ny jiro fa tsy hamoronana atmosfera sy tontolo iainana fotsiny.
ny loko cálidos manome fahatsapanaóisa akaiky ary ny mangatsiaka avy lavitra. Ny lanjan'ilay hamafin'ny feon'ny loko tsirairay dia misy akony ihany koa ary ny soatoavina avo sy manazava dia manome hasina, halavirana, fahabangana.
Mifanohitra amin'izany, ny soatoavina ambany sy maivana dia manondro fanatonana. Etsy ankilany, manazava loko mazava ny fiaviana mazava, omeo atmosfera misy fifaliana ary zava-dehibe kokoa amin'ny ankapobeny. Ary farany, ny fiaviany maizina dia mampihena ny loko, mampalahelo ny zavatra manjavozavo ary tsy manadino azy manontolo.
Ny loko dia mampifantoka ny saina, mampiroborobo ny gadona amin'ny fitantarana sy ny montage, ary maneho fotoana mahery kokoa.
Ny karazana loko sy ny fitambaran'izy ireo amin'ny scenario samihafa
Fangaro mitambatra Triadic
Ity fitambarana ity dia tena fahita matetika amin'ny sinema, amin'ny maha-cocktail manaitra azy izay mifanohitra amin'ny fampidirana loko fahatelo izay manome firindrana.
Manana hery lehibe izy ireo más ampiasaina amin'ny pelísuperh borikyéroes na sarimiainaón, izay misy loko marevaka manintona hisarika ny saina ary tsy ho voamariky ny olona. Ny sasany amin'ireo loko marevaka izay ampiasaina dia mena, mavo, volomboasary ary maitso. Ny tanjona dia ny fahitanao azy ireo foana sy ny fisehoan'ny toetranao tanteraka.
Drafitra loko Monochrome
Ity fitambarana ity dia ampiasaina más tsara amin'ny sehatra manokana noho ny amin'ny horonantsary iray manontolo, satria misy ny fanomezana tonony mitovy amin'ilay sehatra iray manontolo, hanehoana fahatsapana manokana. Ny hevi-dehibe dia ny tsy hampiasanao ny sainao be loatra amin'ilay sehatra hitodihanao amin'ny zavatra misongadina indrindra ary izany dia ny tsy hizahanao be ny manodidina anao satria toa mitovy daholo ny zava-drehetra
Fampifangaroana loko analog
Ny fahatsapana tadiavina dia ny famantarana ny zava-misy feno, miaraka amin'ilay mpilalao fototra sy ilay mpijery.
Ho an'ny teny mazava kokoa, rehefa voadona ilay mpilalao sarimihetsika lehibe, ny loko manasongadina ny voina, ohatra, dia afangaro amin'ny fomba hafa mba hitazomana ny zava-drehetra ho ambany kokoa, mampalahelo ary moana. Ho fanampin'ny loko lehibe, misy om roaás loko mifanila aminy izay manana hery mitovy.
Noho io antony io dia misy sarimihetsika izay mampiasa azy amin'ny seho tena manokana midika hoe fiovan'ny fomba fitenyón ary ny hafa izay manao an'io mandritra ny horonantsary ary raha sendra azonao atao ny manamarina an'io trangan-javatra io, mahazo vola kely ianao ary mividy horonantsary mampatahotra na sary mihetsika, ireo no tsara indrindra ho hitanao fiovan'ny chromáticos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Fampifangaroana loko hafa amin'ny kodiarana chromatic
Google Font dimy hafa sy izay eritreretin'ireo mpampiasa azy momba ny typeface
Hevitra 12 samihafa amin'ny famolavolana sary